१० सुविधाहरू तपाईंको ब्लगबाट हराइरहेको छ Martech Zone
केहि प्रतिक्रिया मैले पाठकहरूबाट प्राप्त गरेको छु कि म ब्लगि about को बारे मा धेरै प्रतिक्रिया प्रदान गरेको छैन Martech Zone। त्यसोभए - आज मैले सोचें कि मैले फरक तरीका अपनाएको थिएँ र तपाईको ब्लगि program कार्यक्रमको वरिपरिको टेक्नोलोजी हेराई पाठकहरूलाई सुविधा प्रदान गर्नका लागि फिचरको चेकलिस्ट प्रदान गर्न र उनीहरूको ब्ल्गमा सुनिश्चित गर्नका लागि।
रोबोट.txt - यदि तपाईं आफ्नो डोमेनको मूल (आधार ठेगाना) मा जानुहुन्छ भने, जोड्नुहोस् robots.txt ठेगानामा। उदाहरण: https://martech.zone/robots.txt - त्यहाँ फाईल छ? एक robots.txt फाइल एक आधारभूत अनुमति फाईल हो जसले खोज ईन्जिन बोट / स्पाइडर / क्रलरलाई कुन निर्देशिकाहरू बेवास्ता गर्ने र कुन निर्देशिकाहरू क्रल गर्न बताउँदछ। थप रूपमा, तपाईं यसमा तपाईंको साइटम्यापमा लिंक थप्न सक्नुहुन्छ! एक छैन? नोटप्याड वा टेक्स्टप्याड खोल्नुहोस् र आफैंमा यो गर्नुहोस्… केवल निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस् Robotstxt.org
साइटमैप .xml - एक गतिशील रूपमा उत्पन्न साइटमैप एक कुञ्जी घटक हो जुन सर्च इन्जिनहरू प्रदान गर्दछaनक्सा जहाँ तपाईंको सामग्री छ, यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ, र कहिले अन्तिम परिवर्तन भयो। अबसम्म सब भन्दा राम्रो साइटम्याप जेनरेटर मैले प्रयोग गरेको छु अर्न्ने ब्रेचोल्डको एक्सएमएल साइटम्याप जेनरेटर। यसले लाइभ / बिंग, याहू, गुगल र सोध्नुहोस् मा साइटम्याप सबमिट गर्दछ! (जब सोध्नुहोस् बुझाउने सेवा काम गरीरहेको छ)।
सामाजिक मीडिया फ्लेयर - मसँग साइटहरूको एक विस्तृत सूची छ जहाँ तपाईं मलाई सामाजिक मिडियामा भाग लिन पाउनुहुनेछ। याद राख्नुहोस् - तपाईको ब्लग सधै कसैको गन्तव्य हुँदैन! कहिलेकाँही सोशल मिडिया साइटहरूमा नेटवर्कि and गर्ने र साझा रुचि भएकासँग मित्रता राख्दा तपाईंको ब्लगलाई सान्दर्भिक दर्शकहरूको लागि बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ ... तपाईंको ब्लग बाहिर। माथिको दाहिने साइडबारमा, तपाईले धेरै साइटहरू फेला पार्नुहुनेछ जहाँ तपाईं मलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ! मलाई मित्रको रूपमा जोड्न नबिर्सिनुहोस्, म फेला पार्नेछु।
मोबाइल अनुकूलता - मोबाइल ईन्टरनेट प्रयोग बढ्दैछ! के तपाईको ब्ल्ग मोबाईल स्क्रिनमा पढ्न योग्य छ? WordPress को लागी, त्यहाँ एक आदर्श WordPress WordPress प्लगइन छ जसले बनाउँछ साइट मोबाइल र आईफोन सफारी उपयोग को लागी अनुकूलित.
विवरण - यदि म तपाईंको ब्लगको तपाईंको एक पृष्ठमा उत्रें भने, मलाई थाहा हुन्छ यो के थियो? कहिलेकाँही पोष्ट पढेर मात्र भन्न गाह्रो हुन्छ। तपाईको साइडबारमा राम्रो वर्णन राख्नु तपाईले कस्तो प्रकारको सामग्री प्रदान गर्नु हुन्छ पाठकलाई सदस्यता लिन वा फर्काउन आवश्यक हुन सक्छ।
सम्पर्क फारम - मँ ब्ल्गरसँग सम्पर्क गर्न टिप्पणी क्षेत्र बाहिर कुनै अर्थ छैन ब्लग को संख्या मा छक्क छु! के तपाईंसँग नेभिगेशन लिंक छ जुन सम्पर्क फारममा स points्केत गर्दछ? सम्पर्क फारामहरू फोन नम्बर भन्दा कम दखल पुर्‍याउँछन् र ईमेल ठेगाना छोड्ने जस्तो जोखिममा राख्दैनन्।
पृष्ठको बारेमा - तपाईं को हो र म किन तपाईं मा विश्वास गर्नुपर्छ? तपाईको उपलब्धिहरु लाई बोल्ने पाना लेख्नकोलाग्दो लाग्छ भने पनि ... यो तपाइँको लागि होईन, आगन्तुकहरुको लागी हो। तिनीहरूलाई केहि दिशा दिनुहोस् किन उनीहरूले तपाईं सुन्नु पर्दछ।
एक चिह्न - ट्याब गरिएको ब्राउजरहरूको आगमनसँग, आइकन थप्दै तपाईंको ब्लग भेद गर्न यो धेरै सजिलो हुन्छ। यदि तपाईंलाई कसरी थाहा छैन भने, केवलaको प्रयोग गर्नुहोस् फेभिकन जेनरेटर आईको (आइकन) फाइल बनाउन र यसलाई तपाईंको वेबसाइटको मूल निर्देशिकामा अपलोड गर्न। अन्य छवि फाईलहरू पनि प्रयोग गर्न सक्दछन्, वा छवि वा आईकन कहीं पनि होस्ट गर्दछ - मात्र अपडेट गर्नुहोस् सर्टकट प्रतिमा लिंक तपाईको हेडरमा
त्याग - हो, तपाईं आफ्नो ब्लगमा प्रकाशित के को लागी मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ। आफु र तपाईको सम्पत्तीलाई बचाउनुहोस् तपाईलाई एक महान छ भन्ने सुनिश्चित गरेर त्याग!
सोशल मिडिया एकीकरण - मार्फत पोष्ट गर्नुहोस् twitter संग Hootsuiteलिंक्डइन, इमेल अनुमोदन, फेसबुक र सिंडिकेशन एक शक्तिशाली उपकरण हो, प्रयोग गर्नुहोस् सिन्डिकेशन यो अधिकतम क्षमता!
टैग: पृष्ठको बारेमाब्लग विवरणसम्पर्क फारमत्यागप्रतिमामोबाइल दृश्यrobots.txtSitemapसामाजिक बटनसामाजिक मिडिया एकीकरण
जुलाई,, २०१ at 22::2009। बिहान
लिंक को लागी धन्यवाद र महान सुझावहरु को लागी। तपाईंसँग वर्णन र अस्वीकरणको बारेमा एक वैध पोइन्ट छ। मेरो ब्ल्गमा यसलाई थप्न 🙂
यो राम्रो सूची हो। मसँग एकै राक्षस लेख छ जुन उही विषयमा मिल्छ, म यी मध्ये केही जोड्दछु र पाठ्यक्रमको क्रेडिटको लागि पछाडि लिंक गर्दछु।
मैले हालसालै ब्लगमा सम्पर्क जानकारी पाउनको लागि कत्ति गाह्रो छ भन्ने बारेमा कुरा गरेको छु र तपाईंसँग बढि सहमत हुन सक्दिन। ठूलो कुरा के हो? त्यसो भए - उफ - मैले पत्ता लगाए कि मसँग कुनै सजिलो तरीका छैन र यसलाई थपियो।
यहाँ धेरै राम्रा सल्लाहहरू छन्, र ब्लगरहरूको लागि राम्रो 'चेकअप'। धन्यवाद!
आशीष @ Magik थिमहरू
जुलाई,, २०१ at 14::2011। बिहान
राम्रो सुझाव डग्लस, मलाई लाग्छ कि तपाईंले आफ्नो रोबोट्स.टी.टी.टी. मा पनि थप्नु पर्छ
# क्रोलर सेटअप
# इन्टरनेट Archiver वेब्याक मशीन
# digg मिरर
तपाईंको पहुँच लग जाँच गर्नुहोस् र यि माकुरो अस्वीकार गर्नुहोस् किनकि ती तपाईंको ब्यान्डविथ चोरी गर्दछन् र तपाईंको साइटलाई छोटो समयको लागि आगन्तुकहरूको लागि अनुपलब्ध बनाउँदछ।